Iindaba zesiXhosa, 26 eyoMdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 26 eyoMdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 26/02/2019
Asizamile namhlanje amathontsana emvula entshona koloni
Bafumana isiqabu noko abemi bephondo leNtshona Koloni kwingqatsini yelanga yeveki ephelileyo nanjengoko namhlanje bevukele kumathontsana angephi emvula nekulindeleke ukuba iqhubeke kude kube semini emaqanda. Ophum kwi-Ofisi yesimo sezulu eKapa uThabisile Nleko uthi umsinga obandayo kulindeleke ukuba uzise imvula kumbindi wephondo leNtshona Koloni nasemazantsi eKapa emvakwemini yanamhlanje nangongcwalazi. Ukanti noko kunjalo akukho mvula ilindelekileyo kubusuku banamhlanje.
Liyinyani na elokuvusa abantu ekufeni?
Ikomishoni yokhuselo nophuhliso lamalungelo ezenkolo neelwimi i-CRL ithi baphikisana nemithetho yendalo neyemvelo abefundisi ababanga ngelithi benza imimangaliso yokuvusa abantu abangasekhoyo phof’bekwenza oku ngeenjongo zokulahlekisa uluntu khon’ukuze lubanike imali. Oku kulandela isiganeko somfundisi ozinze eRhawutini obanga ngelithi uvuse indoda ekufeni ngecawe. Kuthe tshitshilili kumaqonga onxibelelwano i-video ebonakalisa umfundisi uAlph Luau weAlleluia Ministries ethandazela indoda esebhokisini yokungcwaba ngelithi uyayivusa nalapho ibonakala iphakama ize ihamba-hambe etyalikeni. Usekela sihlalo weCRL unjingalwazi David Mosoma uthi ukuba umntu ubanga ngelithi uphikisene nendalo kufuneka kubekho ubungqina obuluqilima obuxhasa oku. Uthi baqaphele ukuba imimangaliso ingamampunge kwakunye neqhinga nje lokusenga imali yabantu abaphelelwe lithemba.
Axakile amaxabiso eeUnifomu zesikolo
Kulindeleke ukuba kubhengezwe isivumelwano phakathi kwekomishoni yokhuphiswano kwezoshishino kwakunye neenkampani ezivelisa izinxibo ezifanayo zesikolo kwiinzame zokwenza ixabiso lazo lifikeleleke. Kuqhutywe uphando emva kwezikhalazo zabazali malunga nexabiso elibaxekileyo leeYuniform kwaye izivumelwano zizakubophelela izikolo kwelokuba ziqashe abavelisi bezinxibo zesikolo belandela iinkqubo zokufaka izicelo ezingeyomfihlo ze izivumelwano zibe zezelixa eliqingqiweyo. Le komishoni ifuna kubekho iiyuniform ezifikelelekayo kwaye ababandakanyekayo kufuneka bazibophelele ekubeni abasayi kuwophulo umthetho wokhuphiswano.
Amagosa endlela acele uncedo lamapolisa ezindleleni
Isixeko seKapa sithi amagosa onyanzeliso-mthetho ewodwa awanakho ukuphelisa uhlaselo lwezithuthi kwiindawo ezithile kuhola wendlela u-N2 noR300. Ukanti noko kunjalo lenyusiwe izinga lokuzula-zula kwamapolisa esixeko nathe anceda abaqhubi abangaphezu kwamakhulu amathathu kwezi nyanga zintathu zidlulileyo abazibhaqa beneengxaki koohola bendlela abayindawo yokuzingela yoozungul’ichele bemigulukudu. Ilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko umnumzana J.P Smith uthi kufuneka ngamandla izisombululo zobunjineli zokuthibaza ukungena ngamakroba koohola bendlela. Kwimpela-veki esiphuma kuyo amapolisa kamasipala abambe abantu ababini ngokwayamene nokuhlaselwa kwabaqhubi ababini ku-R300. Aba barhanelwa bebeyinxalenye yeqela labalishumi abazama ukuphanga abaqhubi abagaxeleke kungquzulwano olubangelwe kukugityiselwa kwamatye endleleni.
Azisadingeki iinkonzo zeBosasa
Isikelwe umda weentsuku ezingamashumi amathathu zokuphela kwezivumelwano sayo nesebe lezoluleko inkampani enikezela ngeenkonzo zokutya i-African Global Operations eyayisakuba yi-Bosasa. Le nkampani ifumene isaziso sokuba iinkonzo zayo azisadingeki kweli sebe. Umphathiswa wezobulungisa umnumzana Michael Masutha uthi ukuzakuthi ga ngoku abasebenzi beli sebe abadizwe njengababandakanyeka kwizenzo gwenxa kwikomishoni kaZondo sele benikwe iimbalelwano zeenjongo zokuthabatha amanyathelo ngakubo. Ukanti kungokunje isebe lezoluleko lisajonga abanye abanikezeli ngeenkonzo zokupheka kananjalo inkampani yakwaBosasa i-Sondolo IT izakuqhubeka okwakalokunje nokunikezela ngeenkonzo zokhuselo ezinkundleni de kuqashwe enye inkampani.
Liyaqhuba ityala lomfundi oqhwatywe ngempama ngutitshala wakhe
Amagqwetha amele umfundi wesikolo i-Sans Souci oqhwatywe ngempama ngutitshalakazi wakhe awonelanga nje kukufaka isikhalazo kwinkundla kamakulinganwe koko ahlab’ikhwelo lokuba umphathiswa wemfundo esisiseko unkosikazi Angie Motshekga aqhube uphando. Lo mfundi notitshala babandakanyeke kuxambuliswano ebutsheni bale nyanga kwaye ushicilelo lwe-video lubonisa utitshalakazi engxolisa lo mfundi aze aphendule phof’ephakama etyhiliza utitshalakazi nophendule ngempama. Bobabini aba banqunyanyisiwe esikolweni baza bavulelana amatyala olwaphulo-mthetho.